Masikati ebeta: Apple inoburitsa iOS 15.5 RC, iPadOS 15.5 RC uye watchOS 8.6 RC | Nhau dze iPhone
Masikati betas: Apple inoburitsa iOS 15.5 RC, iPadOS 15.5 RC uye watchOS 8.6 RC
Tony Cortes | 12/05/2022 20:14 | WWDC 2021
Nhasi izuva rebeta muCupertino. Uye semazuva ese mukambani, vachangobva kuburitswa kamwechete, kune ese maApple zvishandiso. Saka vanogadzira vanogona kutodhawunirodha mavhezheni Release Candidate kubva kuIOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, watchOS 8.6, uye macOS 12.4.
Ndivo vatova RC shanduro. Izvi zvinoreva kuti zvatove ichangoburwa pre-launch betas yeshanduro yekupedzisira yevashandisi vese. Kana pasina chekugadzirisa, iwo akafanana neshanduro dzatinogona kurodha mumazuva mashoma.
Avo vanobva kuCupertino vachangobva kuburitsa beta yechishanu yeese masystem avo asingasviki awa yapfuura. Ndivo Release Candidate vanovaka iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, watchOS 8.6, uye macOS Monterey 12.4 iripo kune vanogadzira kuisa uye kuedza.
Kuburitswa kwanhasi kunotevera yechina yekuvandudza beta, yakatangwa muna Chivabvu 3. Wechitatu akasvika musi wa26 Kubvumbi. Yechipiri yakazviita muna Kubvumbi 19, uye yekutanga beta yeIOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, watchOS 8.6 uye macOS 12.4 yakaburitswa musi wa5 wemwedzi wapfuura.
Iyo iOS 15.5 betas kusvika parizvino yaisanganisira mareferenzi kune app «Apple Classicalpamwe nechinhu chitsva cheImba app chinoratidza zviratidzo zveWi-Fi zveHomePod, uye kuwanikwa kwe "Chikumbiro" uye "Tumira" mabhatani eApple Pay Cash muWallet app.
Nhamba itsva yekuvaka yeIOS 15.5 uye iPadOS 15.5 ndeye 19F77, ichitsiva 19F5070b. Iyo tvOS 15.5 yekuvaka nhamba ndeye 19L6570, iyo inotsiva yekare kuvaka kwe19L5569a, uye iyo watchOS 8.6 kuvaka nhamba ndeye 19T572 maringe ne19T5570a yapfuura.
Zvese zvakagadzirira, saka, kuti software yese iyi iburitswe zviri pamutemo kune vese vashandisi kazhinji, kutora mukana we WWDC 2022 kutanga kwemwedzi unouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » WWDC 2021 » Masikati betas: Apple inoburitsa iOS 15.5 RC, iPadOS 15.5 RC uye watchOS 8.6 RC
Apple inogona kubatanidza USB-C kune iyo iPhone 15 ichiti zvakanaka kune Mheni